Nicolas Dupuis, sy ilay irakiraka mpanafiky ny klioba divizionina voalohany frantsay, Racing club de Strasbourg, Ludovic Ajorque, mikasika ny fanatevenan’ity farany ny Barea. Tsy nety nanaiky hatrany no sady tsy nandà anefa ity farany fa nangataka ny hieritreritra satria sambany tafaverina ao amin’ny ligy voalohany frantsay rahateo ny ekipany tamin’iny taon-dasa iny. Nilaza ho nahatsapa ny toerana misy ity irakiraka mpanafika ity moa ny mpanazatra Dupuis ary nilaza ny heviny fa mpilalao mendrika na eo amin’ny filalao na ny fitondran-teny i Ludovic Ajorque na dia eo aza ny fiheveran’ny mpitia kitra Malagasy azy ho mampifila sy ireo tsikera maro samihafa. Raha ny fampahafantarana nataon’ny mpanazatra ihany koa dia tsy mbola nanome valinteny hatrany anefa hatreto ity mpilalao ity fa vinavina heno avy amin’ireo tekinisianina kosa no mety hanoloany ny toeran’i Faneva Ima eo anivon’ny Barea. Andrasana ato ho ato rahateo ny tena fanapahan-kevitra farany ho raisin’ity mpilalao ity.